Dungeon Hunter 5 wuxuu helayaa cusbooneysiin ballaaran oo ku saabsan | Wararka IPhone
In kasta oo aysan ahayn qaybinta ugu wanaagsan ee taxanaha, Godka Hunter 5 Waxay leedahay taageerayaal aad u tiro badan sida kaliya ee looga ilaaliyo inay ku xirnaadaanna waa in lagu daro waxyaabo badan ciyaarta. Waxaa la sii daayay Febraayo ee la soo dhaafay oo ay si toos ah ugu socotaa Dungeon Hunter 4, kulankaan doorka lagu ciyaaro kaliya helay cusbooneysiin weyn oo ah qaab ballaarin.
"Xinkashi Waa la Furay", taas oo ah sida ay ugu ballameen ballaarinta, wuxuu ku darayaa shan xaaladood oo cusub qalcadda oo ay ku jiraan dabinno, hawlgallo cusub, hub cusub, hub cusub iyo wararka ficil ahaan dhinac kasta.
Cusboonaysiinta mawduucan ayaa ina keenaysa jawi naga dhigi doona inaan dareemo inaan nahay bariga fog, oo leh xaalado maalinle ah oo cusub mid kasta oo ka mid ah dhacdooyinka cusub iyo tikidhada la heli karo si loo helo hub Xinkashi aad u xoog badan.
Hawlgallada maalinlaha ah ka sokow, cusboonaysiintaan waxaa ka mid ah caqabado cusub oo toddobaadle ah oo aan ka qayb qaadan karno si aan hub iyo hub cusub uga helno qaar "madax ah" (madax), sidoo kale waa lagu soo daray saddex hawlgal shaqsi. Sida aad u arki karto haddii aad horeyba u ahaan jirtey Dungeon Hunter 5 ciyaartoy, warar badan iyo horumarin ayaa lagu soo kordhiyey taas oo ka dhigaysa khibraddu mid ka duwan sidii hore si ay mar kale u ciyaarto sidii ay tahay qayb cusub.
Haddii aad jeceshahay ciyaaraha door-doorka, in kasta oo aan hore uga faallaynay in aanu ahayn sida ugu fiican ee loo yaqaan 'saga', waa u qalantaa isku day. Dabcan, haddii aad boos ku haysatid iPhones-kaaga maxaa yeelay waa ciyaar 801mb ah oo xittaa culeys kugu sii kordheysa muddo kadib. Ciyaarta ayaa ah bilaash ah iibsashada gudaha-app Si dhakhso leh loo kobciyo, waxay u baahan tahay macruufka 7 ama ka dib waxaana loo habeeyay iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Ciyaaraha IPhone » Dungeon Hunter 5 wuxuu helayaa cusbooneysiin kooban oo weyn